PVC dahaarka Gabion mesh - Shiinaha Hebei Samsung Birta Wire mesh
Waxyaabaha of PCV dahaarka PVC gabion gabions dahaarka leh, nooc ka mid ah sanduuqa mesh silig, waxaa la sameeyey ee shabaqa silig hexagonal culus la-xidhkii by silig biraha. PVC gabions dahaarka leh dhexroor dibadda waa ka 3.0mm si 4.5mm, iyo dhexroorka of silig qar ama silig ku laayeen waa mid ka mid silig eeg sii dhumuc weyn tahay silig mesh caadi ah. PVC gabions dahaarka ka samaysan yihiin caag dahaarka leh silig steel galvanized: tayo sare leh silig steel carbon hooseeyo, waxaan duub lakabka ilaalinta PVC dushiisa ee xarigga birta galvanized, ka dibna u tidicdo ...
Min.Order Tirada: 10 Set / dajisaa
Supply Kartida: 500 Set / dajisaa per Day
Waxyaabaha of PCV dahaarka gabion
PVC gabions dahaarka leh , nooc ka mid ah sanduuqa mesh silig, waxaa la sameeyey ee shabaqa silig hexagonal culus la-xidhkii by silig biraha. PVC gabions dahaarka leh dhexroor dibadda waa ka 3.0mm si 4.5mm, iyo dhexroorka of silig qar ama silig ku laayeen waa mid ka mid silig eeg sii dhumuc weyn tahay silig mesh caadi ah.
PVC gabions dahaarka leh ka samaysan yihiin caag dahaarka leh silig steel galvanized: tayo sare leh silig steel carbon hooseeyo, waxaan duub lakabka ilaalinta PVC dushiisa ee xarigga birta galvanized, ka dibna u tidicdo galay shabaqa silig hexagonal oo ay ku jiraan dhammaan caddaymaha. Tani waxay daaha ilaalinta PVC xoojin kartaa ilaalinta ka dhanka deegaanka wasakhaynta sare. Dhanka kale waxaan dooran kartaa midabyo kala duwan si ay u dhigma la degaanka ku xeeran.
The caddaymaha caadiga ah ee gabion PVC dahaarka
Sida caadiga ah ballaciisu yahay 2.5mm si 3.4mm
caddaymaha kale ee ka macaamiisha ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa.
Codsiga of PVC dahaarka gabions
Gabions waxaa loo isticmaalaa in xaalado badan oo ay ka mid yihiin xasilinta dhaqdhaqaaqa dhulka iyo nabaad guurka, gacanta webiga, berkadood, dayactir kanaalka, muuqaalka dhirta iyo derbiyo xafidaada, iwm
Features iyo faa'iidooyinka PVC gabions dahaarka
PVC gabions dahaarka dhali kartaa Niyadjabka xoog iyo extruding xoog iyo sii ay qaab. Gabions waa sahlan ku filan si loo soo dajiyo in waayo-aragnimo ma loo baahan yahay si aad u hesho natiijo wanaagsan. PVC dahaarka ka baxsan silig steel galvanized, PCV dahaarka gaions ka fiican resistence daxalka, antioxidation, cimri dherer, waqti isku mid ah PVC dahaarka gabion ka qurux badan u-PCV oo aan dahaarka leh. Waxaan u dhigma karo degaanka ku xeeran iyo dadka raaxo badan.
Next: U Nooca Wire
PCV dahaarka Gabion mesh